ကျွန်မနှင့် လတ်တလော ကိစ္စများ | The World of Pinkgold
ကျွန်မနှင့် လတ်တလော ကိစ္စများ
Posted on December 22, 2008 by cuttiepinkgold
စာမေးပွဲလည်းပြီးပြီ၊ အလုပ်တွေလည်း တော်တော်များများ ဖြတ်ပြီးသွားပြီ ဆိုတော့ စိတ်ကတော်တော်လေးကို ပေါ့သွားတယ်။ ဒီကြားထဲ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ဆိုပေမယ့် ခရီးထွက်လိုက်ရသေးတော့ လန်းလန်းဆန်းဆန်းလည်း ဖြစ်လာတယ်။ ခရီးထွက်ရတာ တော်တော်လေးကို မိုက်တာပဲ။ ကျွန်မ နောက်ထပ်လည်း ခရီးတွေ အများကြီး သွားချင်သေးတယ်။ ပုဂံ၊ စစ်ကိုင်း၊ ပုပ္ပါး၊ အင်းဘေးဘက်တွေ၊ ကလောဘက်တွေ အချိန်လည်းရှိ၊ ပိုက်ဆံလည်းရှိရင် သွားအုံးမယ်။ ရှမ်းပြည်ဘက်တွေ မရောက်ဘူးသေးဘူး။ မသွားခင်တော့ အွန်လိုင်းကနေ သူငယ်ချင်းတွေ ရှာသွားရမယ်။ ဒါမှ အားကိုးရှိမှာ မဟုတ်လားရှင့်။
ကျွန်မက သူငယ်ချင်းတွေကို သိပ်ချစ်တတ်တယ်။ ကိုယ်က ချစ်သလောက် ခင်သလောက် ကိုယ့်ကို ပြန်မခင်တဲ့အခါလည်း မပြောပြတတ်အောင် ခံစားရတယ်။ ကိုယ်က သူတို့တွေကို သတ်ရနေတဲ့အခါ ငါ့ကိုများ သူတို့တွေ သတိရနေလေမလား၊ ငါတစ်ယောက်ထဲ ဒီလိုဖြစ်နေတာ တရားရဲ့လားလို့ ပြန်ပြန်တွေးမိတတ်တယ်။ ခုတစ်လော အရမ်းခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို တော်တော်လေးကို လွမ်းမိတယ်။ သူနဲ့မတွေ့တာ စကားမပြောဖြစ်တာ ကြာရောပေါ့။ ဂျီတော့ပေါ်မှာ ဆိုပေမယ့် တော်တော်ကြီးကို ခင်ခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပေါ့။ အရင်တုန်းက ကိုယ့်အကြောင်းတွေ သူ့ကိုအကုန်ပြော၊ သူ့အကြောင်းတွေကိုလည်း ကိုယ်ကနားထောင်ပေးရင်း ပျော်စရာ အချိန် တော်တော်များများကို ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးတယ်။ အခု ကိုယ်လည်းအလုပ်များ၊ သူလည်း အလုပ်များရင်း မအားကြတော့တဲ့ အချိန်လေးတွေမှာ သူနဲ့ အရင်တုန်းကလို ပေါက်ကရလေးဆယ် ထိုင်ပြောချင်ခဲ့ဖူးတာလေးတွေကို ပြန်တွေးရင်း ကျွန်မ လွမ်းတစ်သသဖြစ်နေမိသေးတယ်။ အဲဒီ သူငယ်ချင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်မ ဘယ်လောက်ထိ ဖြစ်ဖူးလဲ ဆိုရင် ကျွန်မမဟုတ်တဲ့ တစ်ခြားသူတွေနဲ့ သူ စကားပြောနေရင် အလိုလိုငိုချင်လာတယ်၊ သူ ကျွန်မကို လျှိုထားတာ တစ်ခုခုကိုများ ကျွန်မ မတော်တဆ သိသွားပြန်ရင်လည်း သူ ငါ့ကို မပြောရလေခြင်း ဆိုပြီး အဲဒီနေ့ဟာ ကျွန်မအတွက် ကမ္ဘာပျက်တဲ့ နေ့လိုပါပဲ။ အခုလည်း သူ ကျွန်မကို မပြောချင်တဲ့ အရာတစ်ခုကို ကျွန်မ သိနေသလိုလို ခံစားနေရတယ်။ ကျွန်မရင်ထဲ ဘယ်လိုမှ နေလို့ မကောင်းဘူး။
ကျွန်မ ဒီအသက် ဒီအရွယ်ထိ အရက်ဆိုတာကို မသောက်ဖူး၊ မမူးဖူးပါဘူး။ ဟိုနေ့က မန္တလေးရောက်နေတုန်း မလုပ်ဖူးတာလေးတွေ တော်တော်လေး လုပ်လိုက်မိတယ်။ အဖော်ကလည်း ကောင်းတာကိုးရှင့်။ အဲဒီနေ့က ရတနာပုံကနေ ပြန်ရောက်လို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ညစာ စားနေတုန်း နောက် သူငယ်ချင်း ကောင်လေးတစ်ယောက် ပုလင်းလေးကိုင်ပြီးရောက်လာရော။ ဟေ့ကောင်တွေ တက်ကီးလား ပါတယ် တက်ကီလား တဲ့။ ဟိုကောင်တွေကတော့ ဟာ မိုက်တယ် လုပ်ကွာ၊ ချမယ်လို့ ပြောနေပေမယ့် ကျွန်မကတော့ ကလယ် ကလယ်နဲ့ ဘာတုန်း တက်ကီးလား ဆိုပြီးမေးနေလို့တောင် သူတို့ကပြန်ပြောကြသေးတယ် “Pre လေး ပါလာတယ်ကွ.. သင်ပေးလိုက်ရအောင်တဲ့”။ အဲလိုနဲ့ သူတို့တွေ မြှောက်ပေးလို့ ပထမ တစ်ခွက်ကို လျှာမထိ၊ မာအထိ ဂွပ် ခနဲ မော့ချလိုက်တာ.. Oh My God! အက်ဆစ်တွေများ ၀င်သွားသလော အောက်မေ့ရတယ်။ လည်ချောင်းတွေရော၊ ရင်ဘတ်တွေရော ပူခြစ်နေတာပဲ။ တော်ပါပြီ တော်ပါပြီလို့ ပြောနေတုန်း ရှိသေး ” ထက် နင်နောက်တစ်ခွက်ဆို အေးဆေးဖြစ်သွားပြီ.. မမူးဘူး ချလိုက်” လည်းဆိုရော အပူသက်သာမယ် ထင်လို့ ထပ်မော့လိုက်တာပေါ့။ နှစ်ခွက်လည်း ၀င်သွားရော လူက မရတော့ဘူး။ လည်ထွက်လာရော။ ကျွန်မနဲ့အတူ မိန်းကလေ3းယောက်၊ ယောင်္ကျားလေး4ယောက် ပါပါသေးတယ်။ သူတို့တွေကျတော့လည်း အေးဆေးပဲ။ ကောင်းနေလိုက်တာ။ ကျွန်မမှာသာ မူးတာကြီးကို ဘယ်လိုမှ မခံနိုင်တော့တဲ့ အဆုံး တစ်အိအိနဲ့ ငိုချလိုက်တာ မြှောက်ပေးတဲ့ ကောင်လေးခမျာ တော်ပါပြီ နောက်တစ်ခါဆို နင့်ကို ဘာဆို ဘာမှ မတိုက်တော့ပါဘူး တောင်ဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်မနဲ့ အမှတ်တရ တက်ကီးလား ညနေခင်း ပေါ့ရှင်။
ဂျီတော့ ဆိုတာ ကျွန်မအတွက်တော့ ဆက်သွယ်ရလွယ်ကူစေဖို့ကလွဲရင် အလွဲသုံးစား မလုပ်မိတဲ့ ပစ္စည်းလေးပါ။ ဂျီတော့ကို ဖွင့်ထားပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေဆို စကားတစ်လုံးတောင် မပြောဖြစ်တာတွေလည်း ရှိတယ်။ တစ်ခါတစ်လေများမှာတော့လည်း ဂျီတော့ပေါ်မှာပဲ အချိန်ကုန်သွားတာရှိတယ်။ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းလား.. အင်း အတန် အသင့်တော့များပါတယ်။ များလွန်းလို့ selection တွေပဲရွေးပြီး အကောင့်တစ်ခုထဲ သပ်သပ်ထည့်ထားရတယ်။ မဟုတ်ရင် တောင်ပြော မြောက်ပြောနဲ့ တော်တော်အချိန်ကုန်တယ်။ အဲဒါကို ဘာမှန်းမသိဘူး တစ်ချို့တစ်လေတွေများ ” ဟဲ့ နင်ဘယ်သူနဲ့ ကျူနေတာလဲ.. ဘာလုပ်နေလဲ…. ပျင်းလိုက်တာဟာ.. အာလူးဖုတ်ရအောင်” ဘာတွေ ဘာတွေ မှန်းကို မသိဘူး။ ကျွန်မအနေနဲ့ အလာပ သလာပ လည်းပြောတာ မှန်ပါတယ်။ တစ်ချို့တွေကျတော့လည်း အလိုက်ကို မသိဘူး ပြောချင်တာတွေ စွတ်ကို ပြောတော့တာ။ ကျွန်မက အလုပ်ကလည်း ခပ်များများရယ်။ တစ်ခါ တစ်လေ တစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောနေရင်း အလုပ်ကြောင့် ဟိုထသွား ဒီထသွားနဲ့ ကွန်ပျူတာရှေ့ မရှိတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်တယ်.. ဟာ… ဘာမှန်းကို မသိဘူး.. မာနကြီးတယ်တို့၊ စကားမပြောချင်ဘူးလားတို့၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဘာထင်နေလဲ တို့.. လာလာပြောကြတာက ရှိသေးတယ်။ “ဟဲ့ သေနေပြီလား” ဆိုတာမျိုးကလည်း ပါသေးတယ်။ နားလည်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိတယ်။ နားမလည်တဲ့ သူတွေလည်းရှိတယ်။ အလုပ်များနေလို့ပါဟယ် ပြောပြန်တော့လည်း… ငါတို့ကို မပြောချင်လို့ မဟုတ်လား ဘာ ညာ ပြောကြသေးတယ်။ စတာနောက်တာကို နားလည်တယ်။ ကိုယ်တောင် တစ်ခါ တစ်ခါ အလုပ်အင်မတန်များတဲ့ လူတွေကို လျှောက်ရစ်နေတာ မျိုးတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါ တစ်လေကျတော့လည်း ဘာမှန်းကို မသိပါဘူး။ ရှင်းပြဖို့ ခက်တယ်။ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာတွေကို အရမ်းမခင်ရင် မပြောပြတတ်ဘူး။ တစ်ခါ တစ်လေ ဂျီတော့ပေါ်မှာလည်း ဘာတွေမှန်းကို မသိဘူး.. ရှုပ်တယ်။
မိန်းကလေးတွေက အချစ်နဲ့ ပတ်သက်လာရင် ယောင်္ကျားလေးတွေထက် ပိုခံစားတတ်ကြသလား.. ပိုပြီးရူးမိုက်တတ်ကြသလား။ ဒါကို ကျွန်မ သေချာမသိဘူး.. သေချာလည်း မပြောတတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတွေ့ဖူးတဲ့ မိန်းမ တော်တော်များများကတော့ တစ်အားကို ချစ်တတ်တဲ့ သူတွေပဲ။ သူတို့ကောင်လေးတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ၀ုန်းဒိုင်းတွေကျဲ၊ အဖြေတစ်ခုကို မရ ရအောင်ရှာ၊ သူတို့ကို မချစ်တော့မှာကို စိုးရိမ်နေကြရနဲ့ ဗျာများနေကြတာကို တွေ့မိခဲ့ဖူးရဲ့။ ကောင်လေးတွေကျတော့ မိန်းကလေးတွေကို ပစိပစ များတယ်လို့ ထင်တတ်ကြတယ်။ တစ်ကယ်က သူတို့တွေ နားလည်မှု လွဲနေတာ.. မိန်းကလေးတွေက စိုးရိမ်မှုတွေ အားကြီးတတ်လို့၊ ဂရုစိုက်မှု၊ ဦးစားပေးမှုကို လိုချင်တတ်ကြလို့ အဲလိုတွေ ဖြစ်နေကြရတာ။ ကောင်လေးတွေ၊ (ယောင်္ကျားတွေပေါ့) ကျွန်မတို့ မိန်းကလေးတွေကို နားလည်ဖို့ တော်တော်လိုအပ်တယ်။ အဲ.. သူတို့တွေ စိတ်ညစ်ကြမှာစိုးလို့ ဘာမှမပြောဘဲ ငြိမ်နေတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ကျပြန်တော့လည်း မခံစားတတ်တဲ့ သူတွေလို့ ထင်တတ်ကြပြန်တယ်။ အချစ်နဲ့ ပတ်သက်လာရင် အသက် အရွယ်တိုင်း မှားတတ်ကြတာပါပဲ။ သေချာတာကတော့ လူနှစ်ယောက်ချစ်ကြတာဟာ ချစ်နေရုံနဲ့ ပြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ နားလည်မှုနဲ့ ယုံကြည်မှုဆိုတာ အရမ်းကို လိုအပ်တယ်။ ဘာမှ သွေးမတော် သားမစပ်ပဲ ချစ်ကြတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ယောက်ဟာ နားလည်မှုတွေ၊ အပြန်မလှန် လေးစားမှုတွေ၊ ယုံကြည်မှုတွေ ရှိမှသာ ရှေ့ခရီးက ဖြောင့်ဖြူးမှာပေါ့ရှင်။ ခုတစ်လော Men are from Mars, Women are from Venus ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလေးကို ဖတ်မိနေတယ်။ အချိန်ရရင် ကျွန်မဘလောဂ့်မှာ တင်ပေးချင်သေးတယ်။
ဘာရယ် ညာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး.. လတ်လောမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလေးတွေ၊ ဖြစ်နေတာလေးတွေကို ချရေးကြည့်တာ။ လာဖတ်ကြတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
strike on December 22, 2008 at 11:40 am said:
pandora on December 22, 2008 at 1:26 pm said:
မာ့ခ် on December 22, 2008 at 1:38 pm said:
>> ကိုယ်က သူတို့တွေကို သတ်ရနေတဲ့အခါ
မသတ်ပါနဲ့ ကြောက်ကြောက် 😛
khin oo may on December 22, 2008 at 3:53 pm said:
နာမည်ကြီးတွေ လာအားပေးသွားကြတာကိုး….။ လေ့လာသွားသည်။ 😛
မျက်လုံး on December 22, 2008 at 4:51 pm said:
အင်း တက်ကီလာ နေထွက်တို့ တက်ကီလာ နေဝင်တို့လည်း မသောက်ရတာကြာပေါ့ 🙂
Gtalk နဲ့ပါတ်သတ်လို့ တို့လည်း ရေးပြီးပေါ့ 😀
sin dan lar on December 24, 2008 at 7:36 am said:
Aung Thet on December 24, 2008 at 10:17 am said:
တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ပွင့်လင်းစွာ ရေးထားတာ
နောက်လည်း အမြဲအာပေး ဖတ်ရှုပါ့မယ်
JulyDream on December 24, 2008 at 4:05 pm said:
ဘာရယ် ညာရယ်တော့ မဟုတ်ဘူး။
strike on December 24, 2008 at 6:10 pm said:
sis စောင့်နေပြန်လာမှ Ginki မှာအပြီဖျင်ကြမယ်၊ သောက်တာကိုပြောတာနော်။